Sidee Shirkaduhu u Calaamadeeyaan Shaqaalaha iyo Miisaaniyadda Bulshada | Martech Zone
Sidee Shirkaduhu u Calaamadeeyaan Shaqaalaha iyo Miisaaniyadda Bulshada
Khamiista, Diseembar 19, 2013 Douglas Karr
Wildfire iyo Ad Age ayaa dhowaan sameeyay a sahan weydiinaya in ka badan 500 suuqgeynta shirkadaha maareeyayaasha iyo maamulayaasha ku saabsan habka ay u wajahayaan suuq geynta bulshada. Waxay barteen waxa ugu wanaagsan uguna guulaha badan ay sameynayaan si ay ula macaamilaan dhagaystayaasha, iyo sidoo kale waxa kuwa la halgamaya bulshada ay sameynayaan.
Warbaahinta bulshada ikhtiyaar uma ahan ganacsiga, waa lagama maarmaan in la ilaaliyo lana ilaaliyo sharafta astaantaada internetka. Laga soo bilaabo adeegga macaamiisha illaa iibinta, waxaad ka heli kartaa warshad kasta khadka tooska ah - adigoo baaraya iibsashadooda xigta iyo faafinta ereyga ugu dambeeya. Dabka Duurka ayaa tilmaamaya waxyaabahaas muhiimka ah:
45% shirkadaha dakhligoodu ka badan yahay $ 1 bilyan waxay leeyihiin in ka badan 50 shaqaale oo loogu talagalay warbaahinta bulshada.
Suuqgeynta, PR, iyo Khibrada Macaamiilku waa kooxaha ugu sareeya ee saami ku leh arrimaha bulshada, hase yeeshe saameyn bulsheed ilaa 10 kooxood oo ka tirsan shirkada.
68% shirkaduhu waxay filayaan inay kordhiyaan kharashaadka bulshada ee wareegga miisaaniyadda ee soo socota, taasoo muujineysa in doorka bulshada ee isku-darka suuq-geynta la aqoonsan yahay oo mudnaanta la siiyay.
Tags: 2013adagemiisaaniyaddaganacsigoogle +sida magacyadu u miisaaniyaanwarbaahinta bulshadamiisaaniyadda warbaahinta bulshadashaqaalexaaladda bulshadaappka dabkabarnaamijyada dab-damiska
10 Tilmaamood oo lagu kobcinayo Webinar-kaaga xiga